Soo dejisan Magic Camera 8.8.5 – Vessoft
Soo dejisan Magic Camera
Camera Magic – software ah in la xoojiyo webcam ah. software The macaamila codsiyada iyo adeegyada caanka ah ee isgaarsiinta sida Skype, CamFrog, Chatroulette, AIM, Stickam, iwm Magic qabashada Camera iyo maaraysa il video la saamaynta graphic ama video kala duwan. software waxay leedahay set badan oo ah saamaynta in lagu dahaadho waji ama accessories in wejigaaga, bedesho taariikhda iyo soo bandhigaan qoraalka. Camera Magic waa ay awoodaan in ay baahin durdurrada video duwan oo isku mar, mid ka mid ah ugu weyn ee shaashadda buuxda oo dheeraad ah oo ku saabsan ay qayb ka yar. Sidoo kale Camera Magic awood si ay u abuuraan saamaynta adag adiga kuu gaar ah adigoo isticmaalaya luqadaha barnaamijyada kala duwan.
saamaynta badan oo muuqaal ah
Dahaadhaa waji ku wejigaaga
Video duubo iyo Screenshot
Comments on Magic Camera:
Magic Camera Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Clownfish for Skype 4.32 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... Yahoo! Messenger 11.5.0.228
العربية, English, Français, Español... Cyberlink YouCam 7.0.0824
العربية, English, Українська, Français... mIRC 7.46
العربية, Français, Español, Deutsch... BS.Player 2.70
العربية, English, Українська, Français... Hot Jingle Player 1.1